१ घण्टा सुताएको ५ हजार लिन्छिन् यी महिला ! « Janata Samachar
१ घण्टा सुताएको ५ हजार लिन्छिन् यी महिला !
प्रकाशित मिति : 11 January, 2019 6:39 pm
भारतमा अहिले अत्याधिक गर्मी छ । त्यहाँको मौसम विज्ञान विभागका अनुसार केही शहरको तापक्रम ५०
सडक किनारमा राखिएको बम पड्किँदा ६ जनाको मृत्यु
कान्दाहार प्रान्तको ठूलो भागमा आत्मघाती र सडक किनारमा बम राख्न सक्रिय रहेका तालिबान लडाकू समूहले
पूर्वराष्ट्रपति जर्दारी पक्राउ
इस्लामावाद । पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति असिफ अलि जर्दारीलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उच्च
प्राथमिक र माध्यमिक तहमा ६ हजार शिक्षक आवश्यक
लेगोस । नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी राज्य बोर्नोमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न करिब छ हजार थप शिक्षक